Bixinta caalamiga ah ee HGH oo ka socota farmasiga tooska ah ee HGH ee Bangkok - HGH Bangkok
Gaarsiinta caalamiga ah ee HGH ee farmasiga tooska ah ee HGH ee Bangkok
Farmashiyahayaga HGH ee khadka tooska ah ee Bangkok wuxuu siiyaa gaarsiinta caalamiga ah dhammaan wadamada adduunka adoo adeegsanaya adeegga boostada ee UPS premium, waxay qaadataa 2-3 maalmood. Waxaan damaanad qaadeynaa gaarsiinta Australia, USA, Canada, United Kingdom, Russia, Europe, Asia iyo dalal kale. Ku
wadamada Bariga Dhexe sida Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta.
Sida aan u bixinno bixinta?
Ka dib marka macmiilku dhammeeyo oo uu bixiyay amarkiisa boggayaga internetka (sida Transfer Wire) Waxaan diyaarineynaa hormoonka koritaanka ee loo diro dalkiisa, hormoonka koritaanka waxaa lagu dhejiyaa baako khaas ah si loo ilaaliyo gudaha qabowga, kaas oo hubiya xaaladaha kaydinta wanaagsan intii lagu guda jiray dhammaan hawsha shixnadda. Kadibna waxaan wacnaa adeegga gawaarida ee UPS, kumbuyuutarka ayaa diyaariya dukumintiga lagama maarmaanka ah iyadoo la socota lambarka raadraaca.
Amarkaaga, tusaale ahaan V022 6083 XXX.
Kahor intaadan u dirin amarkaaga adeegga geynta, waxaan cusbooneysiineynaa waqtiga laga soo diray UPS. Marka Waxay yareyn laheyd waqtiga keydinta amarkaaga baakadka sida ugu macquulsan. Tusaale ahaan baakadka ay heshay UPS subaxnimadii Sabtida, wuxuu baxayaa habeenka Sabtida macmiilkuna wuxuu ku qaabilaa albaab ilaa albaab shaqsi ahaan Isniinta.
Lambarka raad Raaca
ka dib markii aan soo dirnay jeebka, lambarka raadinta ee amarkaaga waxaa loo diri doonaa cinwaanka emailkaaga.
Waxaad ka heli doontaa macluumaadka maraakiibta lambarka raadinta V022 6083 XXX Wakhtiga kasta waxaad ka hubin kartaa goobta cusub ee la cusbooneysiiyey iyo waddada bakhaarkaaga internetka. Tan waxaa lagu sameyn karaa bogga rasmiga ah.
buuxi lambarkaaga raadraaca oo aad heshay macluumaad ku saabsan qashinka waqti kasta.
Miyaa wax dhibaato ah ku keeni karnaa caadooyinka ama kala wareegga?
Macaamiisha badankood waxay horey u amar ku bixiyeen hormoonada koritaanka bogagga internetka oo aysan ku faraxsaneyn taasi. Qaar ka mid ah gawaarida ayaa la wareegay caadada, waligoodna alaabtooda ma helin. Dukaankayagu wuxuu damaanad-qaadayaa gaadhsiinta albaabka, waxaannu leenahay khibrad ah in aan hormarno hormoonka hormoonka HGH wax ka badan sanadaha 5 ee dhammaan dalalka adduunka.
Waxaan ka warqabnaa waxyaalihii kala duwan ee nadiifinta dhaqaalaha ee wadamo badan. Haddii loo baahdo, waxaan ku darsannaa dukumintiyada la socda iyo risiidhka ku yaal qaybta.
Marka lagu daro qalinka-baakada kuleylka-kululeeyaha waxaa horey loogu sii diyaariyey kiis qalin qaas ah oo hubiya amniga nadiifinta kastamka iyo ka hortagga la wareegidda.
Dhammaan amarrada HGH waxay ku xirxirayaan baako gaar ah si ay u qabtaan heerkul joogto ah, oo aan ka badnayn 12-16 digrii.
Marka loo eego baaritaanka shaybaarka, ma saameyneyso tayada alaabta, iyadoo leh waqtiyo gaaban macmal (wakhtiga dhalmada).
Liiska dalal bixinta hormoonka koritaanka:
Loo soo diray: Shipping
Next article Gaadiidka caalamiga ah ee HGH
Waa salaaman tahay maxaa sarrifka ah ee loo yaqaan 'Poter Sterling Slinglingling' mahadsanid waxaad rajeyneysaa inaad dhowaan la soo xiriirto Jason
Jan - Noofembar 9, 2019
Waxaan khibrad u leenahay iyo waxyaabaha gaarka ah ee aan gaarsiineyno Jarmalka, waxaan dammaanad qaadeynaa gaarsiinta nabdoon
ama waxaan lacagtaada kuugu soo celin doonaa akoonkaaga
Klaus - Noofembar 9, 2019
Haa, waxaan ka imid Jarmalka
Ma dammaanad qaadi kartaa inaad Jarmalka si ammaan ah u gaarsiiso?